Ụbọchị My Pet » Top 5 Ịkụdo maka abịaghị n'oge na-a Ụbọchị
Top 5 Ịkụdo maka abịaghị n'oge na-a Ụbọchị
The kasị njọ akụkụ banyere ịbụ mbubreyo maka a ụbọchị na-abịa ihu na ihu n'aka onye ahụ a na-eche on ị. Mgbe ọ pụrụ isi ike, -eme ihe n'eziokwu mma mgbe nile iwu. Plus ma ọ bụrụ na gị ụbọchị bụ n'ezie nghọta, ọ / ọ ga-kpam kpam na-enye gị anyị obi,. N'okpuru ebe, na-ise credible ngọpụ maka abịaghị n'oge na a ụbọchị.
Ị googled ọmụmụ ihe ahụ ọtụtụ ugboro, n'isi ụzọ, hapụrụ a nkeji ole na ole n'isi ma ị ka bụ mbubreyo. Ma ọ bụ arọ okporo ụzọ ma ọ bụ na ị kụrụ ọ bụla red ìhè, misjudging oge bụ ihe n'eziokwu ndudue na bụ mfe forgivable.
Izere iji Suri, M na-abụkarị Google ese m njedebe ikpeazụ na-a foto nke ntụziaka tupu m na-ahapụ. Ka a na-enye ohere maka kwesịrị ekwesị ụbọchị nkwadebe oge, Ọ dịghị mgbe m na-ekwesị dọrọ aka ná ntị mgbe m kwesịrị atụgharị ma ọ bụ ebe kpọmkwem m njedebe ikpeazụ a nke n'aka nke na-akpata n'azụ oge. Ọzọ, ịbụ n'ihu banyere nke a na-emekarị-eme ka a ezigbo ọchị banyere nchefu.
-Enweghị ike ịhụ adọba ụgbọala
Bi n'obodo nke-abụkarị pụtara na e nweghị adọba ụgbọala. Mgbe ọ kacha mma ịhọrọ a na ọnọdụ n'ime eje ije anya, abụkarị, ndị kasị fun ụbọchị tụrụ na-adịghị a adaba eje ije anya efep. Na nke a ọnọdụ, ọ kasị mma chọta kacha nso adọba ụgbọala Ọdịdị mgbe na-ejide n'aka ị na-enye onwe gị oge zuru ezu iji na-abata na a-adọ ha n'ụzọ.
Pet dara ọrịa
N'ịbụ a Pita hụrụ (Olileanya gị ụbọchị bụ oke), gị Pita bụ nwa gị. Mgbe na-abịa n'ụlọ ịgbanwe outfits n'ihu gị ụbọchị na ịsụ ngọngọ gafee gị Pita na-yiri ka n'okpuru weather, ị ndammana na-aga na-nkasi-obi ha. Ka a na-akasi obi nwere ike ịgafe karịa na-atụ anya, ma gị na Pita ga-adị ala karị, karịsịa ebe ị n'abalị nwere ike ịbụ mgbe e mesịrị karịa na mbụ.
Ọrụ efehe mbubreyo
Site ikpeazụ nkeji nzukọ na impromptu oru ngo na-ịlụ furu ọrụ gị, ya nile na-eme anyị. Mgbe a credible ngọpụ ọrụ, jide n'aka na ọ bụghị ghọọ a àgwà ka gị ụbọchị ga-ahụ na gị, ọrụ ọzọ bụ nke a mkpa karịa mmekọrịta gị.
Ihe ọ sọrọ gị ngọpụ, ọ dị mkpa na-agwa gị ụbọchị na ị ga-anọ ọdụ. Ọ bụghị nanị na nke a dị mma ogbugbu, ma ọ na-egosi na ị bụ onye na-elekọta mmadụ.